ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ရိုးသားမှု မီးအိမ်
တစ်ကယ်တော့ လူတိုင်းက ငယ်ဘ၀ရဲ့ရိုးသားမှုကို တောင့်တမိကြတာကြီးပါပဲ။
ဆွေလေးကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဦးလေးတွေ အဒေါ်တွေကြားထဲမှာဆိုရင်တော့ တစ်ကယ်ကလေးလိုပဲနေပါတယ်..
အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ နေရာတွေမှာတော့ ရင့်ကျက်မှု တည်ငြိမ်မှုတို့ကို အချိုးကျရောစပ်ပြီး အသုံးပြုပါတယ်။
ပက်၂စက်၂ တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ မောင်မျိုးရေ...
မီးအိမ်လေးကို ဆီနဲနဲ ထည့်ကြည့်ချင်ယုံပါ...
သေချာနေတာတစ်ခုက ကိုယ်တို့ တွေရဲ့ အသက်ဆိုတာငယ်သွားနေတာ မဟုတ်သလို၊
တစ်နေ့ ပြီးတစ်နေ့ ကုန်ဆုံးသွားနေ
ရင်းအသက်တွေက ကြီးလာတာ။ အချိန်တွေရဲ့
ရွေ့ လျားမှုနဲ့ အတူ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ရိုးသားခြင်းဆိုတဲ့မီးအိမ်လေးမှာ တည်ငြိမ်ရင့်ကျပ်လာခြင်း၊ လောကဓံကို
နှုတ်ဆက်တတ်လာခြင်း၊ အမှားအမှန်ကြားမှာ ကျားကန် တတ်လာခြင်း၊ခြင်းးး...ပေါင်းများစွာသော
လူပီသခြင်းတွေဆိုတဲ့ မီးစာတွေကိုပဲ ထပ်ဖြည့်သွား
ရမှာလို့ယုံတယ် မောင်မျိုးရေ။
မိန်းခလေးတွေ လူကြီးပီသလာဖို့ ဆိုတာ...???
ကဲ.... မောင်မျိုးကို ဝေဖန်တာမဟုတ်။
ခေါင်းစဉ်လေးကိုက ဆွေးနွေးလို့ ကောင်းတာမို့ 
ပါဝင်မိခြင်းသာ။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လဲကြိုးစားနေဆဲမို့ ။
ဒီလောက်ထိ တွေးနေတာကိုက မောင်မျိုး
လူသားဆန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်နေတာ
ကိုယ်ကတော့ ရိုးသားမူ့ ဆိုတာ
there is no real growth.
( ဆရာတော်ဦးဇောတိက )
အဲဒါ တစ်ယောက်သော သူက ဖုန်းဆက်လိုက်လို့နိုးတာ
အင်း အဲ နဲ့ထူးတော့ ဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်လဲ
သူငယ်ချင်းရ။ ငါထင်တာလေးပြောမယ်နော်။ သူများတွေ ပြောတာ ဝေဖန်တာကိုထား။ မင်းတို့ငါတို့ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမို့လား။ မင်းလုပ်နေတဲ့အရာတွေ။ မင်းယုံကြည်တဲ့အရာတွေ၊ မင်းရဲ့အမူအကျင့်တွေဟာ ဘုရားဟောနဲ့ မဆန့်ကျင်ဘူးဆိုရင် မင်းအသက် ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ လူကြီးဆန်တ......ဲ့သူ။ ရင့်ကျက်တဲ့သူပဲ။ လူဆိုတာအစုံလုပ်ဖူးရမယ်၊ မကောင်းမှန်းသိရင်ရှောင်လိုက်ပေါ့ဆိုတဲ့စကားကို ပြောတဲ့သူတွေ တော်တော်များများငါတွေ့ဖူးတယ်။ တကယ်က သူတို့ဟာသူတို့ မဟုတ်တာလုပ်ချင်တာနဲ့ အကြောင်းပြချက်ရှာတာပါကွာ။ အစုံလုပ်ဖူးစရာမလိုပါဘူး။ အရက်သောက်လို့ ဘ၀မှာတိုးတက်ကြီးပွားသွားတဲ့သူ ဘယ်နှစ်ယောက်မြင်ဖူးလို့လဲ။ ဒါဟာမကောင်းဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိနေတာပဲ။ စမ်းကြည့်စရာမလိုပါဘူး။ အဲလိုအစုံလုပ်ဖူးချင်ရင်အက်ဆစ်သောက်ရင်သေတတ်သတဲ့။ စမ်းကြည့်ကြပါလား။ ဥပမာပြောတာပါကွာ။ လူတိုင်းကတော့ အမြင်အမျိုးမျိုးပေါ့။ တကယ်ပြောရရင် ဘ၀လောကဓံကို အများကြီးကြုံခဲ့တဲ့ မင်းက တော်ရုံတန်ရုံလူတွေ (ငါအပါအ၀င်ပေါ့) ထက် ရင့်ကျက်ပြီးသားလို့ငါထင်တယ်။ ဘာသာတရားနဲ့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တရားစီရင်ပါကွာ။ လူများပါးစပ်တွေနောက်လိုက်ရင် ပင်းပန်းတယ် သူငယ်ချင်း။
မောင်မျိုး... နားလည်မှုလွဲနေတယ်လို့ ထင်တာပဲ...။ လူကြီးဆန်တယ်ဆိုတာ ဟန်ဆောင်ကောင်းတယ်လို့ ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးလေ..။ ပြီးတော့ ကလေးဆန်တိုင်း ဟန်မဆောင်တတ်တဲ့သဘောမှ မဟုတ်တာ..။ လူကြီးဆန်တယ်ဆိုတာ အရာရာတိုင်းကို ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်နဲ့ တွေးတယ်၊ ဆင်ခြင်တယ်၊ သုံးသပ်တယ်...။ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာဟာ ဘာလဲဆိုတာကို လေ့လာနိုင်စွမ်းရှိသူတွေကို လူကြီးဆန်တယ်လို့ခေါ်တယ်...။ တကယ်တော့ လူကြီးဆန်တယ်ဆိုတာ အသက်ငယ်တုန်း အဲလိုစိတ်မျိုးမွေးနိုင်တဲ့သူတွေကို သုံးတာပါ..။ အသက်ကြီးလာရင် အဲလိုစိတ်မျိုးက မဖြစ်မနေရှိရမှာဖြစ်ပြီးတော့ လူကြီးဆန်တယ်လို့လည်း ဘယ်သူမှ ဆိုမှာ မဟုတ်ဘူးလေ...။ ကလေးဆန်တာမှာ နှစ်မျိုးရှိတယ်..။ တစ်ခုက ပင်ကိုယ်စိတ်ကိုက ရိုးသားပြီးတော့ ကလေးဆန်ဆန်ပြုမူပြောဆိုတာ...။ နောက်တစ်ခုက ကိုယ်အနိုင်ကျင့်ချင်တဲ့သူတွေကိုမှ ရွေးပြီး ကလေးဆန်ပြီး အနိုင်ယူတာ...။ ဒီအတိုင်းကြည့်ရင်တော့ နှစ်ခုလုံးမကောင်းဘူး..။ ဒါပေမယ့် ဒုတိယဟာက ပိုဆိုးတယ်...။ အဲဒီ ဒုတိယလိုပုံစံမျိုးဆိုရင် ရိုးသားမှုဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ ထည့်ရဲမလား...။ နောက်ပြီး ကလေးဆန်ဆန်ပြုမူပြောဆိုတတ်တဲ့သူတွေမှာ သူ့ကို လက်ခံနိုင်မှုဟာ အကန့်အသတ်ပဲရှိတယ်...။ အေးပေါ့... ဘယ်သူ့မှ ဂရုမစိုက်ဘူး ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရှိရင်တော့ ဒါဘာမှ ဂရုစိုက်စရာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့...။ ဒါပေမယ့် ဘ၀မှာ ရှင်သန်ရဦးမယ့် ခရီးက အရှည်ကြီး...။ ကိုယ့်ဘ၀ကို ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ရမယ့် ခရီးက အဝေးကြီး...။ ဒါကြောင့် အောင်မြင်တဲ့ဘ၀ကို တည်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကလေးဆန်ဆန်အတွေးခေါ်တွေကို ဖျောက်ပစ်နိုင်ရမယ်...။ မင်းရဲ့ နောက်ဆုံးစာကြောင်း ကျနော် တကယ့်လူကြီးကြီး တစ်ယောက်လို နေလိုက်ရင် ကျနော့်ရဲ့ ရိုးသားမှု မီးအိမ်လေး ငြိမ်းသွားလိမ့်မှာ ကြောက်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ရှင်းရှင်းလေးပဲ ငြင်းပယ်ခဲ့ပါရစေ သူငယ်ချင်း...။
ကလေးဆန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် လူကြီးဆန်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်လုပ်တာတွေက မှန်တာလုပ်နေဖို့လိုတယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်တွေကို အာရုံစိုက်နေဖို့လိုတယ်။ သူများပါးစပ်မှာ အာရုံတွေလွင့်မျောမသွားနဲ့ လွင့်မျောသွားမိရင်တောင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ထိန်း။
ကမ္ဘာကျော်ကဗျာဆရာကြ...ီး ရှယ်လီတောင်မှ သူ့ကို ကလေးဆန်တယ်လို့ ဝေဖန်တာခံရဖူးတာပဲ။
လူတိုင်းမှာ ရှင်သန်ကြီးပြင်းလာကြတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မတူတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ တွေးခေါ်ပုံ နဲ့ နေပုံထိုင်ပုံ ပြောပုံဆိုပုံတွေ မတူကြဘူး။ မင်းသာ တက္ကသိုလ်ဆရာ နဲ့ ဆရာမရဲ့သား ဆိုရင် မင်းရဲ့ ပြောပုံ ဆိုပုံနဲ့ နေပုံထိုင်ပုံတွေ အခုလိုဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါပြောတာ မဖြစ်ရကောင်းလားလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်...။ တစ်ကယ်တမ်းတော့ မင်းက နယ်မှာမွေးတယ် ၊ ကြီးမှ မြို့ကိုရောက်တယ်။ နယ်မှာဆိုတော့ ဒီမှာလို ဘာမှထိန်းချုပ်စရာမလိုဘူးလေ... လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြော ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ခံစားမှု့ရတယ်။ အစွန်းနှစ်ဖက်ကို ချက်ချင်းဆွဲစေ့ လိုက်တဲ့ အခါ ဝေဖန်သံတစ်ခုခုတော့ ကြားရမှာပေါ့။
ကိုယ်နေတတ်သလိုသာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရိုးသားရင်းနဲ့နေစမ်းပါကွာ။ ဘာကိုမှ ဂရုစိုက်မနေပါနဲ့။ အဲ့ ဂရုစိုက်ရမှာက မင်းအခုရှိနေတဲ့ ရိုးသားမှု့တွေကို မချိုးဖောက်မိစေနဲ့ ။
လောကကြီးမှာ အစုံလုပ်ဖူးစရာမလိုဘူး။ အစုံသိဖို့တော့လိုတာပေါ့လေ...။
သူမျာလုပ်တိုင်းလိုက်လုပ်တဲ့ အထဲမှ မင်းမပါတာသိတော့ ငါဝမ်းသာပါတယ်။
ဒီလိုပဲ...ငါအခုထိ နားပေါက်မဖေါက်ဘူး၊ ဆေးမှင်ကြောင်မထိုးဘူး။ ကိုယ့်ခံယူချက်နဲ့ ကိုယ်နေရတဲ့ ဘ၀ ဂုဏ်ယူဖို့ကောင်းသလို၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု့လည်းပိုတယ်။
လူကြီး ဆန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် တွေ့ဖူးတယ်။ သူ့ကြည့်လိုက်ရင် လူကြီး လူကောင်းလို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ကိုယ်တို့ထက်တောင် ရင့်ကျက်မယ့်ပုံပဲ တစ်ကယ်တမ်း စိတ်နဲ့ပေါင်းကြည့်တော့ မိန်းမတစ်ယောက်လောက်တောင် ရင့်ကျက်မှု့နဲ့ စာရိတ္တမကောင်းတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ငါ့ကိုယ်ငါတောင်ရင့်ကျက်တယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး။ ရိုးသားတယ်လို့ မထင်ခဲ့လို့။ ရင့်ကျက်မယ်ထင်တဲ့လူကို ပေါင်းမိကာမှ ကိုယ့်ထက်ပိုဆိုးနေတာတွေ့ရတယ်လေ... ။
မိတ်ဆွေငါးဆယ်ရှိပေမယ့်။ ရိုးသားပြီး ရင့်ကျက်တဲ့ လူငါးယောက်နဲ့ တွေ့ဖို့ကမလွယ်ဘူး။ ရင့်ကျက်တဲ့ လူတွေ့စေဦးတော့ ရိုးသားတဲ့ လူနဲ့ တွေ့ဖို့ကမလွယ်ဘူး။
အသက်နဲ့အမျှတော့ ရင့်ကျက်ရမှာပဲလေ မောင်မျိုးရ..။
ဒါပေမယ့် ရင်ကျက်လာတာက မရိုးသားတော့တာတော့
ကရောဘာလဲ...?ကိုယ့်အမြင်တော့ စိတ်ခံစားမှုကို သိပ်ပြီး
လာနိုင်တာမျိုး...။လူကြီး မဆန် ဆန်အောင်ဆိုပြီး ရုပ်
တည်ကြီးနေဖို့တော့ လိုဘူးထင်တယ်..။ဆိုတော့ ရီချင်
Brova Bravo said...
ခလေးကျ နေတာပဲကလေး ကျနေတာ ပဲ ဆိုတာကကျွန်တော့်အထင် ကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အတွေးမျိူးကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ နေထိုင်ပုံစံမျိူးကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ခံယူချက်မျိုး မပျောက်သေးတာကို ဆိုလိုတာများလားဗျမရင့်ကျက်သေးဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်ဘူးသူ့မှာ ကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ အပြူအမူမျိုး ပြန်ပေါ်လာတာကို ဆိုလိုတာမျိူးကျွန်တော်အတွေ့အကြူံအရကလေး ကျ နေတာပဲ ဆိုပြီး ဆူတာ ရှိသလိုချစ်ဖို့ကောင်း တယ် ကလေး ကျနေတာပဲ ဆိုတာမျိုးလည်း ရှိပါ့ဗျာ